राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी « Image Khabar
Tag: राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी
काठमाडौं, मंसिर २२ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)ले स्थानीय तह निर्वाचन परिचालन समिति गठन गरेको छ । पार्टी केन्द्रिय कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको राप्रपाको केन्द्रिय कार्य समितिको बैठकले महामन्त्री भुवन पाठकको
राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको रोजाइमा विक्रम पाण्डे
काठमाडौं, मंसिर १७ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीमा विक्रम पाण्डे दुवै समूहको रोजाइमा पर्नुभएको छ । कमल थापा र राजेन्द्र लिङ्देनको समूहबाट पाण्डेलाई छुटाएका छैनन् । शुक्रबार राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको अध्यक्षमा
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको सुरु हुन लागेको केन्द्रीय एकता महाधिवेशनमा अध्यक्ष पदका लागि धमाधम उम्मेदवारी घोषणा हुँदैछ । राप्रपाका वर्तमान अध्यक्ष कमल थापा पुनः अध्यक्षमा उठ्दैछन् भने उनलाई झापाका
कमल थापाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने
काठमाडौं । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) को महाधिवेशनमा कमल थापाले अध्यक्ष पदमा उम्मेदवारी दिने हनु भएको छ । आज राष्ट्रिय सभागृहमा कार्यक्रम गरेर उहाँले अध्यक्ष पदमा उठ्ने घोषणा गर्न लाग्नु
प्रणालीनै परिवर्तन भए मात्रै देशको विकास हुन्छ : कमल थापा
चितवन, साउन २४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले पात्र फेरिएर नभई प्रणालीनै परिवर्तन भए मात्रै देशको विकास हुने बताउनु भएको छ । भरतपुर विमानस्थलमा आज पत्रकारहरुसँग कुराकानी गर्दै
नयाँ सरकारबाट जनतामा आशा र भरोसा छैन् : कमल थापा
हेटौंडा, साउन ६ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापाले गठबन्धनबाट बनेको नयाँ सरकारबाट जनताले धेरै आशा र भरोसा नगरेको बताउनुभएको छ । शान्ति, स्थिरता र समृद्धिले जनताको आशा विपरित
कमल थापाले कसे आफ्नै दुई अध्यक्षप्रति व्यंग्य, दुई अल्छी घोडाको चेपुवामा परे !
काठमाडौं, जेठ २४ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) का अध्यक्ष कमल थापाले आफ्नै पार्टीका दुई अध्यक्षप्रति व्यंग्य कस्नुभएको छ । नाम नलिई तर, संकेतको निशाना छाड्दै थापाले आफ्नै सहकर्मी दुई
संक्रमितको निःशुल्क र सहज उपचारको व्यवस्था गर्न राप्रपाको माग
काठमाडौं, बैशाख १८ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कोरोना संक्रमितको निःशुल्क र सहज उपचारको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेको छ । राप्रपाका अध्यक्षत्रय पशुपतिशमशेर जवरा, डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी र कमल थापाले
राज्यका अंगहरुमा सरकारले प्रहार गर्‍योः डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी
काठमाडौं, १७ चैत्र । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष डा. प्रकाशचन्द्र लोहनीले सन्तुलन र नियन्त्रण राख्ने अंगहरु सरकारी प्रहारबाट कमजोर भएको बताउनुभएको छ । रिपोर्टर्स क्लब नेपालको २३औं वार्षिकोत्सव समारोहमा डा.
राप्रपाले गर्‍यो प्रदेश कार्यसमितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मनोनयन
काठमाडौं, फागुन २६ । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मनोनयन गरेको छ । राप्रपाले ६ वटा प्रदेश कार्य समितिका अध्यक्ष र उपाध्यक्ष मनोनयन गरेको हो ।